AKHRISO:Fashilkii R/Wasaare Xasan Kheeyre Iyo Balanqaadyadiisii Oo Ku Soo Koobmay IGU SAWIR -
HomeArimaha bulshadaAKHRISO:Fashilkii R/Wasaare Xasan Kheeyre Iyo Balanqaadyadiisii Oo Ku Soo Koobmay IGU SAWIR
July 6, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la magacaabay 23-kii bishii Feb. 2017, waxa uuna Kalsoonida Baarlamaanka uu helay 1-dii bishii Marso 2017.
Khubadii ugu horreysay ee uu jeediyo waxay aheyd midi uu ku soo bandhigay Barnaamijkiisa siyaasadeed ee dalka isagoo hortaagan Golaha Shacabka. Kheyre ayaa sameeyay ballan weyn waxaana ugu weynaa 8 qodob oo kale.
Gurmadkii qaran ee Abaaraha Soomaaliya sanadkii 2017-kii
Wax ka qabashada arimaha Amniga
Dhisidda Ciidan qaran iyo xasilinta dalka
La dagaalanka Musuq maasuq iyo hagaajinta mamulka iyo maareynta
Hirgelinta cadaaladda iyo dhismaha Garsoorka
Dhameestirka dasuurka iyo federaaleynta dalka iyo hergelinta azxaab siyaasadeed
Doorashooyin dalka ka dhaca heer federaal, heer gobal iyo heer degmo
Dib u heshiisin, mideynta dalka iyo wadashaqeynta dalka
Warbixintaan waxaan ku eegi doonnaa waxyaabihii uga qabsoomay 8-dii qodob ee uu ballan qaaday 2 sano ka hor Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo sanadkii 3aad bilooyin ka qaatay.
La dagaalanka musuq maasuq iyo hagaajinta mamulka iyo maareynta: Kheyre ayaa sidoo kale dagaal weyn la galay Musuq Maasuq, iyadoo loo xiray Wasiiro, Saraakiil Ciidan, Agaasimayaal iyo mas’uuliyiin kale oo dowladood. Inkastoo wali musuq maasuqa lacagta jira lana sheego inuu ka jiro xafiisyada sare ee dowladda hadana waxa uu maanta joogaa heerkii ugu hooseyay Soomaaliya markii loo eego sanadihii ugu dambeeyay ee musuq maasuqa Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya la dagaalanka musuq Maasuqa waxa ay ku koobtay oo kaliya lacagta la lunsado oo kaliya balse waxba kama aysan qaban musuq maasuq kale ee ku saleysan nin Jecleysiga, qaraaba kiilnimada iyo qaababkale ee wax loo musuq maasuqo. Waxaan oran karnaa arinta la dagaalanka Musuq maasuqa Kheyre wax fiican ayaa ugu bilaaban.
Dhisidda Ciidan Qaran iyo Xasilinta dalka: Dhismaha Ciidan Qaran waa mid kamid ah waxyaabihii uu ballan qaaday Xasan Cali Kheyre isagoo hortaagan Baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa la dhihi karaa waa ku guul dareeystay waayo ciidamo dhisan ayuu ku tilmaamay in ay yihiin beelo ciidankaasina waxaa horay u soo dhisay dowladihii KMG AHAA Laga soo Bilaabo Madaxweyne C/QASIM .AUN M/weyne C/LAHI YUSUF M/WEYNE SHARIIF IYO M/WEYNE XASAN SHIIQ.
Xasilinta dalka: Qodobkaan Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre kuma guuleysan waxaana muuqata in dalka aysan ka jirin xasilooni amni. Goobo badan ayaa waxaaa dib u qabsaday Al-shabaab halka degaano kalane ay wajahayaan amni darro iyo cabsi weyn. Labadii sano ee la soo dhaafay waa ku fashilantay qodobkaan laakiin waxaa u harsan waqti ay ku qaban karto.
Amniga: Amniga waxa uu ahaa ballanqaadkii ugu weynaa Ra’iisul Wasaare Kheyre waxaana la ogyahay in ay dowladda ku fashilantay gabi-ahaanba qodobkaan. Amaanka dalka oo ay ugu horreyso Muqdisho waxa uu marayaa meel kamid ah waqtiyadii ugu xumaa mana muuqato wax ay Xukuumadda Kheyre ka qabatay arimaha amniga. Qodobkaan xataa bilaaw fiican maleh lamana oga mudada harsan sida ay u wejihi doonto.
Hirgelinta cadaaladda iyo dhismaha Garsoorka: Garsoorka iyo Cadaaladda oo ah halka ay Cadaalada Darada ugu weyn ee Soomaaliya ka jirto ayaa ah waxyaabihii uu ballan qaaday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waana qodob kamid ah waxyaabihii uu ku guul dareestay 2dii sano ee la soo dhaafay.
R/Kheyre bilaaw wanaagsan kama sameynin garsoorka dalka, waxayna shacabka Soomaaliyeed wali qabaan kalsooni darro iyagoo qaarkood u cadaalad doonta Al-shabaab. Xukuumadda wali waxey heysataa fursad ay ku sixi karto nidaamka garsoorka Soomaaliya oo maraya meel aad u liidato.
Federaaleynta: Xukuumadda R/Wasare Kheyre waxay sameysay Qorsha ah Diktatoornimo waxayna dagaal weyn la gashay Federaalka ama maamul gobaleedyada dalka. Xukuumadda Kheyre wali waxay wadaa dagaalka ka dhanka maamul gobaleedyada mana jirto hal dowlad gobaleed oo ay heshiis yihiin. in ay jiraan dagaal lamid ah kan Xukuumadda iyo caqabado kale oo ay dowladda dhexe kala kulmeyso maamulada dalka ka jira oo aan dagaalka aheyn Xukuumadda oo kaliya.
Hergelinta Axzaab Siyaasadeed: Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ee dalka hogaamiso qodobkaan waa ku guuldareeysatay waxaana ay caburun iyo xarig u geeysatay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada dalka waxaana ay ka mamnuucday isku soo baxa axzaabta siyaasadeed iyo kulumada ay qabsanayaan.
Doorashooyin dalka ka dhaca heer federaal, heer gobal iyo heer degmo:-dhamaan qodobadaan Xukuumadda midkoodna kuma guuleysan waxaana mudadii ay joogtay dalka ka dhacay 2 doorasho oo kala ahaa KGS iyo Puntland. Door kuma laheynd Doorashadii Puntland dowladda Soomaaliya waxaana agaasintay maamulkaasi halka doorashada KG Xukuumadda lagu eedeeyay in ay si qaldan u maamushay oo ay geysatay shaqsi ay u hurtay maal iyo muruq Waxaana ay ku Xasuuqeen Shacab Fara badan Oo Sameeynayay Banaan bax Magaalada Baydhabo Waxaana ay Xabsiga u Taxaabeen Musharaxa Muqtaar roboow.
Dib u heshiisin, mideynta dalka iyo wadashaqeynta dalka: 3-daan qodob midkodna Xukuumadda Kheyre kuma guuleysan xataa waxba ugama bilaawna. Dalka waxaa ka jira colaado sokeeye mana jirin waxyaabo ay ka qabatay Xukuumada 2-dii sano oo ee la soo dhaafay. Mideynta dalka sidoo kale ma jirto wax laga qabtay walina ma bilaaban wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadashaqeynta dalka, ma jirto wax wadashaqeyn ah oo dalka ka jiro waana mid kamid ah.
Dhismaha Dalka R/Wasaare Kheyre Waxaa Jiray in uu mashariic badan uu dhagax dhigay sida wadada isku xerto jowhar iyo afgooye ,mana jiraan ilaa iyo hadda wax shaqo ah oo ka socda waxaana ay u muuqataa mid uu ku guul dareeystay, waxaan uu dhawaan mashariic uu dhagax dhigay qaar ka tirsan deeganada galmudug waxaana ay ku soo dhamaan donan sawir iyo hadal kaliya .
W/Q Liibaan balcad